कम्पोस्ट फोहोर कसरी गर्ने?
जैविक फोहोर कम्पोस्टिंग घरपरिवारले घरमा आफ्नै मल बनाउँदा आवश्यक र अपरिहार्य हुन्छ। खाद्यान्न फोहोर पशुपालन फोहोर व्यवस्थापनमा एक कुशल र आर्थिक तरिका हो। त्यहाँ घरेलु जैविक मल प्रक्रियामा २ प्रकारका कम्पोस्टिंग विधिहरू उपलब्ध छन्।
सामान्य कम्पोस्टको तापमान ℃० डिग्री भन्दा कम हुन्छ, कम्पोस्टिंगको लामो समय हुन्छ, सामान्यतया -5--5 महिना।
त्यहाँ तीन पिलिंग प्रकारहरू छन्: फ्ल्याट प्रकार, अर्ध-पिट प्रकार, र पिट प्रकार।
फ्ल्याट प्रकार: उच्च तापमान, धेरै वर्षा, उच्च आर्द्रता, र उच्च भू-पानी स्तरको साथ क्षेत्रहरूको लागि उपयुक्त। सुख्खा, खुला भूमि छनौट गर्दै पानीको स्रोत र यातायातको लागि सुविधाजनक। स्ट्याकको चौडाई २ मीटर छ, उचाई १.२-२ मिटर, कच्चा मालको मात्राबाट लम्बाइ प्रबन्धन। ढिस्को जुस अवशोषित गर्न घाँस वा टर्फको एक तहको साथ सामग्रीको प्रत्येक तहलाई स्ट्याकिंग र कभर गर्नु अघि माटोलाई तल झार्न। प्रत्येक तहको मोटाई १ 15-२4 सेमी हुन्छ। वाष्पीकरण र अमोनिया अस्थिरता घटाउन प्रत्येक तह बीच दाँया पानी, चूना, फोहोर, रात माटो आदि। एक महिनाको स्ट्याकिंग पछि स्ट्याक चालू गर्न स्व-प्रोपेल्ड कम्पोस्ट टर्नर (सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कम्पोस्टिost मेशिन मध्ये एक) ड्राइभि Dri गर्दै, र यस्तै अगाडि, सामग्रीहरू विघटन नभएसम्म चिसो वा माटोको सुख्खाको अनुरूप पानीको उचित मात्रा थप्दै। कम्पोस्टिंग दर मौसम अनुसार भिन्न हुन्छ, सामान्यतया ग्रीष्ममा २ महिना, जाडोमा months- months महिना।
अर्ध पिट प्रकार: सामान्यतया वसन्त र जाडोमा प्रयोग गरिन्छ। 2-3- feet फिट गहिराइ, 5--6 फिट चौडाई, र -12-१२ फिट लम्बाइको खाडल खन्नको लागि घाम र ली साइट छनौट गर्दै। खाडलको मुनि र भित्तामा, त्यहाँ क्रसको रूपमा बनेको एयर प्यासेज हुनुपर्दछ। कम्पोस्टको माथिको धरतीको साथमा १०,००० केटीहरू सुख्खा स्ट्राहरू थपेर उचित रूपमा छाप्नुपर्दछ। एक हप्ताको कम्पोष्टि after पछि तापमान बढ्नेछ। खाद्यान्न प्रकार कम्पोस्ट ट्युनरको प्रयोग गरी ment-7 दिनसम्म तापमान घटेपछि किण्वनको ढेरलाई समान रूपमा परिवर्तन गर्न, त्यसपछि अन्ततः कच्चा माल विघटन नभएसम्म स्ट्याकिंग राख्नुहोस्।
पिट प्रकार: २ मीटर गहिराई। यसलाई भूमिगत प्रकार पनि भनिन्छ। स्ट्याक विधि अर्ध-पिट प्रकारसँग मिल्दोजुल्दो छ। को समयमा विघटन प्रक्रिया, डबल हेलिक्स कम्पोस्ट टर्नरलाई हावासँग राम्रो सम्पर्कको लागि सामग्री फेर्न प्रयोग गरिन्छ।
थर्मोफिलिक कम्पोस्टिing कार्बनिक सामग्री, विशेष गरी मानव फोहोरलाई सहज रूपमा उपचार गर्न एक प्रमुख विधि हो। हानिकारक पदार्थहरू, जस्तै कीटाणु, अण्डा, घाँसको बीउ आदि स्ट्राहरू र उत्सर्जनमा, उच्च तापमान उपचार पछि नष्ट हुनेछ। त्यहाँ २ प्रकारका कम्पोस्टिंग विधिहरू छन्, फ्ल्याट प्रकार र अर्ध-पिट प्रकार। प्रविधिहरू सामान्य कम्पोस्टिंगसँग समान छन्। यद्यपि स्ट्राको विघटनको गति बढाउन, थर्मोफिलिक कम्पोस्टिंगले उच्च तापमान सेल्युलोज विघटन ब्याक्टेरिया खोप्नुपर्दछ, र वातन उपकरण स्थापना गर्नुपर्दछ। चिसो प्रुफ उपायहरू चिसो क्षेत्रमा गर्नु पर्छ। उच्च तापमान कम्पोस्ट धेरै चरणहरूमा पार गर्दछ: ज्वरो-उच्च तापमान-तापमान ड्रपिंग-डेकम्पोजि।। उच्च तापमान चरणमा, हानिकारक पदार्थहरू नष्ट हुनेछन्।
Rहोममेड अर्गानिक मलको सामग्री
हामी हाम्रो ग्राहकहरु लाई निम्न प्रकार छनौट गर्न को लागी सुझाव दिन्छौं घर बनाएको जैविक मलको कच्चा माल हुन।
१. प्लान्ट कच्चा माल
१.१ खसेको पातहरू
धेरै ठूला शहरहरूमा सरकारहरूले पतित पातहरू स to्कलन गर्न मजदुरलाई पैसा तिर्ने गर्थे। कम्पोस्ट परिपक्व भएपछि, यसले बासिन्दाहरूलाई कम मूल्यमा बिक्री गर्दछ वा बिक्री गर्दछ। यो to० सेन्टीमिटर भन्दा माथि पृथ्वीको लागि उत्तम हुन्छ यदि यो उष्णकटिबंधीयमा हुँदैन। ढेरलाई पातहरू र माटोको भुईंबाट माथि बिरूवाहरू बिभिन्न तहहरूमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक तहमा झर्ने पातहरू 5-१० सेन्टीमिटर भन्दा कम राम्रो हुन्छन्। खसेको पात र माटो बीचको अन्तराल कभरेज सड्न कम्तिमा to देखि १२ महिनाको आवश्यक पर्दछ। माटोको ओसिलो राख्नुहोस्, तर माटो पोषण को हानि रोक्न अत्यधिक पानी नखाउनुहोस्। यो उत्तम हुन्छ यदि तपाईंसँग विशेष सिमेन्ट वा टाइल कम्पोस्ट पूल छ भने।
मुख्य कम्पोनेन्टहरू: नाइट्रोजन
माध्यमिक घटक: फास्फोरस, पोटेशियम, फलाम
यो मुख्यतया नाइट्रोजन मल, कम एकाग्रताको लागि प्रयोग गरिन्छ र यो जडमा सजिलै हानिकारक हुँदैन। यसले फूल फुल्ने फल लिने चरणमा धेरै प्रयोग गर्नु हुँदैन। किनभने फूलहरू र फलहरूलाई फस्फोरस पोटेशियम सल्फरको मात्रा चाहिन्छ।
यदि सडेको फल, बीउ, बीउ कोट, फूलहरू र आदि प्रयोग गर्नुभयो भने, सडेको समयलाई अलि लामो समय लाग्न सक्छ। तर फास्फोरस, पोटेशियम र सल्फरको सामग्री धेरै बढी छ।
१.3 बीन केक, सिमी dregs र आदि।
गिरावटको स्थिति अनुसार, परिपक्व कम्पोष्टलाई कम्तिमा to देखि months महिनाको आवश्यक पर्दछ। र परिपक्वता द्रुत गर्ने उत्तम तरिका ब्याक्टेरियाहरूको inoculated हो। कम्पोस्टको मानक पूर्ण गजबको गन्ध बिना नै हो।
फास्फोरस पोटेशियम सल्फरको सामग्री फोहोर कम्पोस्ट भन्दा उच्च छ, तर यो फल कम्पोष्टमा अवर छ। सोयाबीन वा सिमी उत्पादनहरू सिधा कम्पोष्ट बनाउन प्रयोग गर्नुहोस्। किनभने भटमासको माटो सामग्री उच्च छ, यसैले रीटिंग गर्ने समय लामो छ। सामान्य उत्साही व्यक्तिको लागि, यदि त्यहाँ उपयुक्त वनस्पतिहरू छैनन् भने, यो अझै पनि एक बर्ष वा केहि बर्ष पछि खराब गन्ध छ। त्यसकारण, हामी सुझाव दिन्छौं कि, सोयाबीन राम्ररी पकाएको, जलाइएको, र फेरि retting। यसैले यसले रीटिting्ग समयलाई घटाउन सक्छ।
भेडाहरू र गाईवस्तु जस्ता जडिबुटी जनावरहरूको फोहोर, किण्नको लागि उपयुक्त छन् जैव मल उत्पादन गर्दछ। यसका साथै उच्च फास्फोरस सामग्रीको कारण, कुखुराको मल र कबूतरको गोबर पनि राम्रो विकल्प हो।
सूचना: यदि मानक कारखानामा व्यवस्थित र पुन: साइकल हुँदैछ, मानव मलमूत्र पनि कच्चा मालको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जैविक मल। घरपरिवार, यद्यपि उन्नत प्रशोधन उपकरणहरूको अभाव छ, त्यसैले हामी तपाईंको मल बनाउनको क्रममा कच्चा मालको रूपमा मानव मलको छनौट गर्न वकालत गर्दैनौं।
Natural. प्राकृतिक जैविक मल / पौष्टिक माटो
Ond पोखरी गाढा
चरित्र: उर्वर, तर चिसोपन मा उच्च। यो बेस मल, एकल प्रयोग गर्न अनुपयुक्त को रूप मा प्रयोग गर्नु पर्छ।
जस्तै ट्याक्सोडियम डिसिचम, कम राल सामग्रीसहित, राम्रो हुनेछ।
अधिक कुशलतापूर्वक। यो सिधा प्रयोग गर्नु हुँदैन र अन्य जैविक सामग्रीसँग मिसिन सकिन्छ।
जैविक मामिलाहरू पूर्ण रूपमा विघटित हुनु पर्छ भन्ने कारण
जैविक मलहरूको अपघटनले माइक्रोबियल गतिविधि मार्फत जैविक मलमा परिवर्तनका दुई मुख्य पक्षहरू निम्त्याउँछ: जैविक पदार्थहरूको विघटन (मलको उपलब्ध पोषक तत्व बढाउनुहोस्)। अर्कोतर्फ, मलको जैविक पदार्थ कडा देखि नरम, बनावट असमान देखि वर्दीमा परिवर्तन हुन्छ। कम्पोस्टको प्रक्रियामा यसले झारको बीउ, कीटाणु र अधिकांश कीरा अण्डालाई मार्नेछ। यसैले, यो अधिक कृषि उत्पादन को आवश्यकता संग पक्का छ।